We Fight We Win. -- " More than Media ": အကြမ်းဖက်သမားများက သခင်မျိုး ဟေ့ ဒို့ဗမာ ကုလား တွေကိ သတ် ဟုကြွေးကြော် ကြတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားများက သခင်မျိုး ဟေ့ ဒို့ဗမာ ကုလား တွေကိ သတ် ဟုကြွေးကြော် ကြတယ်။
နေပါဦး ဒါက ဘာသဘောနဲ့
မိုသီး မင်းဟာ လုံးလုံး မရိုးသားတဲ့ကောင်
မြို့တွေရဲ့စာရင်း/ ဘာလဲ ဒီမြို့တွေ ဒီမြို့တွေ
မှာဖြင့် မပျက်သေးဘူး သွားဖျက်ကြ
မင်းရဲ့ အဲဒီလို ရိုးသားမှု့ မရှိတာ စေတနာ
လည်လှ တတ်လှပေါ့။ တော်တော် ရီရတဲ့ကောင်။
ဘာတဲ့ ရှိပါသေး "capacity" နိမ့်နေလို့
မြှင့်ပေးရဦး မဆိုပဲ။ မင်းတော်တော်ကို
ခေါင်းနဲ့ကိုယ် အိုးစားမကွဲပဲ "States"
၁၃ယောက်လူအုပ်ကို ၂စုကွဲသွားတာ ၉ယောက်တစု
၅ယောက်တစုလားတဲ. ဟီးဟီး အင်တာဗျူးကတော်တော်အဆင်.၇ှိတဲ.အင်တာဗျုး